Iglasi yesiselo seglasi / abavelisi bejar, abaXhasi - iBhotile yeglasi yeglasi yesiselo / iJar mveliso
250ml ibhotile yeglasi juice yesiselo kunye nesiciko aluminiyam
Ibhotile yeglasi eyi-250ml ecacileyo inokusetyenziselwa ukuhambisa iimveliso ezahlukeneyo kubandakanya neencindi zeziqhamo, amanzi, ubisi ukungcangcazela nokunye okuninzi. Nokuba uthini imixholo yakho, ziya kujongeka zinobuhle kwaye zintle kule bhotile. Ukuba ufuna ukwenza uphawu okanye ukuguqula iibhotile zakho, zinokuphawuleka ngokulula ngolwazi lweemveliso zakho. Ukwenza ubomi bakho bube lula ngakumbi!
8oz 16oz umlomo umlomo iglasi yesiselo ibhotile yeglasi kunye nesiciko metal
Le bhotile ilungele uluhlu olupheleleyo lweziselo. Khawufane ucinge ngokufaka iidiliya okanye ijusi yeorenji kwezi bhotile? Xa kuthelekiswa neminye imidlalo, baya kuqhuba kakuhle.
Iglasi eyi-300ml yaseNew Zealand ekhanyayo ngebhotile yamanzi yendalo kunye nesiciko sesciko
Ibhotile yeglasi ecacileyo eyi-500ml ilunge kakhulu kwisoda okanye amanzi amaminerali kunye nabathengisi beziselo eziphezulu, iivenkile ezinkulu kunye namanye amashishini. Ngenxa yokuguquguquka kwayo kunye noyilo lwakudala, inokusetyenziswa kuwo onke amabakala eshishini lakho lesiselo.
I-1000ml ye-1 yeelitha zeebhotile zobisi zeglasi zesikwere ezinezikhuselo zobungqina beplastiki
Le bhotile yobisi yeglasi ilungele ukuhambisa iziselo kuwo nawuphi na umsitho, nokuba yipati, umtshato okanye ipikniki. Ezi zikhulu ngobukhulu, ubungakanani obulungele iziselo, kwaye kulula ukuzicoca! Ziyakulungeleka kakhulu njengokuhombisa okanye njengeentyatyambo zokubekwa kwetafile. Ezi bhotile zeglasi zicacileyo "zeediliya" nazo ziza nesivalo esenziwe ngobungqina seplastikhi esibenza balungele amatheko kunye nemibhiyozo okanye izipho zokuya ekhaya. Ungazisebenzisa kaninzi.
Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Sula iibhotile Pump Pump, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi,